Iifoto ezivela kwimenyu entle yesi sibhedlele saseJapan | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La Impilo yoluntu lilungelo lokuba ilizwe lethu beliqaqambileNangona kule minyaka idlulileyo kuye "kwachukunyiswa" ngokwaneleyo ukuze ngamanye amaxesha sijonge kwamanye amazwe ngomona omncinci; nangona oku kunzima xa kuthelekiswa nabanye.
Eli bali ivela kwifoto ethathwe ngumfazi owabelekela kwisibhedlele saseJapan. Ngokwakhe wafumanisa umgangatho wemenyu awayezama ngayo ngezo ntsuku esibhedlele, ngakumbi xa wayenomzuzu obaluleke ngoluhlobo wayenjalo.
Kwaye kukutya kwesibhedlele saseJapan kubonakala ngathi kuziswe kwivenkile yokutyela ekumgangatho ophezulu apho sihlala sisitya kubapheki abakhulu. Lo mfazi kubhalwe isitya ngasinye ngekhamera yakhe ukurekhoda umgangatho wayo nganye.
Ezo zitya zibandakanya naziphi na izidlo ezilulutho esinokuzifumana kwindawo yokutyela ephezulu, okanye nakwindawo yaseJapan. Isosi yamakhowa, ithanga lifakwe inyama yehagu, okanye idayikon kunye nesaladi yomnqatha, eminye yemizekelo yezo zitya ziphekwayo.
Kwakungoku wazisiwe ngenani leekhalori awayezithatha ngemini kule menyu yemihla ngemihla. Nditsho nezinye izidlo ezinencasa ezinje nge-cream puff pastry okanye iqhekeza elincinci lekhekhe kunye neti emalanga. Ingqokelela yemifanekiso ethathwa leli bhinqa kwaye iReddit isetyenzisile ukubonisa ukumangaliswa kwayo ngendlela ebephethwe ngayo; Kufuneka kuthiwe ngumMelika, ke uthelekiso phakathi kwelizwe lakhe neJapan lungaphezulu kokucacileyo.
Uye wakwazi ukuvula umsonto wengxoxo bonisa umahluko kwimenyu ekhulelweyo sele eza kubeleka esibhedlele. Ngokumangalisayo, kunye nenye inkcukacha yelizwe elihle njengeJapan, ngamanye amaxesha sihamba nemizekeliso yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Ukubeleka kwisibhedlele saseJapan sendawo, kunye nemenyu ephantse yafana nevenkile yokutyela
Amagqabantshintshi ombala ngeFotohop.